Fasan-karana: Nodomina kamiao ny sarety 06, maty ny iray tao anaty sarety
mercredi, 14 août 2019 22:53
Lehilahy 01, sahabo 27 taona no notanan’ny Polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana (BAC) ny zoma faha 09 aogositra teo, rehefa avy nandona sarety maromaro teny amin’ny Fasan-karana ka nahafatesana olona 01.
Ny alarobia faha 07 aogositra 2019 tokony ho tamin’ny 12 ora sasany alina no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity teo amin’ny Fasan-karana. Kamiao 01 avy any Vontovorona ka nentin’ny mpamily haterina any amin’ny orinasa iasany eny By-Pass no nifanena tampoka tamina fiara hafa. Tsy nahatana ny familiana ilay mpamily kamiao ka nifatratra tamina sarety miisa 06 nipetraka teo amoron-dalana.
Lasa nandositra avy hatrany moa ity kamiao ity rehefa avy nandona ireo sarety ireo. Fotoana fohy taty aorina dia tonga teny an-toerana ny Polisy nizaha ny zava-nitranga. Tamin’izany no nahitana ny vata mangatsiakana lehilahy 01 tao anatin’ny iray tamin’ireo sarety ireo.
Fantatra fa mpiambina sy mpitarika sarety eny an-toerana ity tovolahy hita faty ity. Fantatra ihany koa fa natory tao anatin’ilay sarety izy tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza ka dia maty voapotsitra tao.
Nokarohina ilay kamiao nahavanon-doza ka ny zoma faha 09 aogositra teo no nitolo-batana teo anivon’ny BAC ilay mpamily. Niaiky ho nandona ireo sarety ireo izy nandritra ny fanadihadiana azy. Natolotra ny Fampanoavana ny alatsinainy faha 12 aogositra 2019.